Warar Goos goos ah. Ruunkinet 28/10/2009
Ma dhab baa in khilaaf soo kala dhexgalay Saraakiisha Xisbul Islaam iyo Shiikh C/raxmaan Ibraahim Macow?
Arbaco, 28, Oct, 2009 Guddoomiyaha Goballka Hiiraan Shiikh C/raxmaan Ibraahim Macow oo kol hore sheegay in uu ku biiray Ururka Xisbul Islaam ee ka mid ah Ururrada ka soo horjeeda Dowladda Soomaaliya ayaa warar hoose oo soo baxaya waxaa sheegayaan in uu mad madow uu soo kala dhaxgalay isaga iyo Saraakiisha Xisbul Islaam ee ku sugan Magaalada Beledweyne.
Shiikh C/raxmaan Ibraahim Macow iyo Saraakiishi Xisbul Islaam ee ku sugan Magaalada Beledweyne ayeey wararku sheegayaan in ay isku khilaafeen arrimo la xiriira Maamulka Magaalada Beledweyne, waxaana ay wararku intaa ku sii darayaan in Saraakiisha sar sare ee ku sugan Magaalada ku amreen Guddoomiyaha in uu iska soo wareejiyo gaadiidkiisa dagaalka.
Sida Ilo xog-ogaal ah oo ku dhow dhow Maamulka Goballka u sheegeen warbahinta waxaa la filayaa in dhawaan Magaalada soo gaaraan Xubno sar sare oo ka tirsan Ururka Xisbul Islaam kuwaas oo lagu wado in ay dhisaan Maamul aan aheyn kii horay uga jiray Magaalada ee uu Guddoomiyaha ka ahaa Shiikh C/raxmaan Ibraahim Macow oo maalintii shalay u amba baxay deegaannka lagu magacaabo Goobo oo ku dhaw degmada Maxaas ee Goballka Hiiraan lamana oga sababta keentay in Guddoomiyaha gaaro deegaannka Goobo oo ay ku sugan yihiin Ciidamo gacan saar la leh Urur diimeedka Ahlu Sunna Waljameeca.
Kulan dalka Yemen ku dhex maray Shariif Shiikh Axmed iyo Cali Cabdala Salax.
Dowladda Yemen ayaa ugu baaqday Beesha caalamka iyo dalalka carabta in la taageero dowladda KMG ee Soomaaliya.
Dowladda Yemen ee uu hogaamiyo Madaxweyne Cali Cabdalla Saalax ayaa ku boorisay Beesha caalamka iyo dalalka carabta gaar ahaan kuwa deriska la ah dalalka ay colaaduhu ragaadiyeen ee Soomaaliya in ay laba laabaan daaladooda ku aadan sidii looga shaqeyn lahaa amaanka,degaanshaha iyo midnimada wadanka Soomaaliya.
"Xukuumada Yemen wax dadaal ah uma reeban doonto taageerada ku aadan xal u helida dhibaatada ka taagan wadanka Soomaalia"ayuu yiri Madaxweyne Cali Cabdalla Salax xilli uu kulan la qaadanayey dhigiisa Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo haatan booqasho rasmi ah ku jooga wadanka Yemen.
Madaxweyne Saalax ayaa sidoo kale soo cusboonaysiiyay daadalada ay Yemen ugu jirto sidii xal waara looga gaari lahaa qilaafka siyaasadeed ee ka ka jira gudaha wadanka Soomaaliya,isagoona carabka ku adkeeyay in amaanka Soomaaliya uu qeyb ka yahay amaanka Yemen iyo guud ahaan gobolka.
Intii uu soconayay kulankooda Madaxweyne Shariif ayaa u soo koobay dhigiisa Yemen xaaladihii ugu dambeyay ee dalka Somalia iyo dadaalada dowladiisa ay ugu jirto sidii dib ay ugu soo celin laheyd amaanka Soomaaliya oo aad looga dayriyay.
waxaana uu dowladda uga mahad celiyay dadaaladeeda ku aadan nabad ku soo dabaalida Soomaaliya iyo sidoo kale daryeelka qaxootiga Soomaaliyed ee halkaasi ku sugan.
Hadalkani ka soo yeeray dowladda Yemen ayaa imanaya xilli uu dalkaasi booqasho ku joogo Madaxweynaha Dowladda KMG ee Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed.
Ganacsigii suuqa bakaraha oo manta xayirnaa ka dib duqeyn loogaysatay.
Suuqa Bakaaraha ayaa maanta ku jira marxalad aan caadi aheyn, kadib markii Taangiyada AMISOM ay isku fidiyeen goobo u dhow suuqa bakaraha
Ciidamada AMISOM oo saaka ku faafay Xaafado ka tirsan Degmooyinka Hodan ayaa waxaa markii dambe lagala hortagay dagaal iyo duqeymo Xoogaga Hubeysan ay ku qaadeen, iyadoo Magaalada waqtigaas gashay jawi aad u kacsanaan ah.
Wadada dheer ee Maka Al-Mukarama ayaa ah mid xiran, iyadoona Wadada Dabka ee Gaadiidka ka geli jireen dhinaca Suuqa Bakaaraha ay iyana tahay mid go'an oo Taangiyada ay taagan yihiin.
Duqeynta ku socota Suuqa Bakaaraha ayaa aad u sii xoogeysanaya saacadba saacada ka dambeysa, waxaana xaalada tahay mid cakiran.
Ganacsiga Suuqa Bakaaraha ayaa ah mid albaabada u laaban, waxaana dadka fara ku tiriska ee saaka galay Suuqa Bakaaraha ku kala carareen Dhismayaasha Shubka oo ay kaga gaashamayaan Madaafiicda tooska ee ku socota.
Ciidamada AMISOM ayaa ka degtay Isgoyska Dabka, iyagoo ku sugan agagaarka Shineemo Hodan, waxaana sidoo kale Ciidamada ku sugan yihiin Dugsigii hore ee Banaadir halkaasoo ay Taangiyo u yaalaan.
Lama oga duqeynta ay ku wadaan Xaafadaha ku dhow dhow Suuqa Bakaaraha, qasaaaraha ay geysanayaan, hase yeeshee dhaq dhaqaaqyada Ciidamada ayaa ah mid wali taagan.
Ciidamada ayaa wali u xiran saacadihii ugu badnaa wadada dheer ee Maka Al-Mukarama, waxaana la ogeyn sababaha ka dambeeyay xirnaanshaha wadadaas iyo dhaq dhaqaaqyada ay ka wadaan.
Dadka Muqdisho ayaa aad u hadal haya dhaq dhaqaaqyada cusub ee Ciidamada saaka ka wadaan, kaasoo ah kii ugu waqtiga dheeraa abid, iyadoo xiliyadii hore aheyd mid dhaq dhaqaaqyadooda muddo kooban ahaa deetana ay dib ugu laabanayeen fariisimahooda.
lamanayaal u dhasahay dalka ingiriiska oo lagu afduubtay xeebaha dalka somaaliya
LONDON -- Xafiiska arrimaha dibadda ee Britain ayaa xaqiijiyeey in uu socdo baadi goob loogu jiro doonidii aay la socdeen laba lamaane oo british ah oo lagu waayey biyaha Somaliya.
Wakaalada badda iyo ilaadada xeebaha ee U.K ayaa sheegtay in doonidii Paul iyo Rachel Chandler aay kasoo baqooshay jasiirada Siishelis kuna wajahnaayeen Tansaaniya markii baaqa xanuunka lasoo diray.
Warkooda lama helin tan iyo xiligaas iyadoo baadigoob aay ku jireen ilaalada xeebta jasiirada Siishels aay lagu guul dareeysteen halkii aay doonida ku dambeeysay. Xafiiska arimaha dibadda Ingiriiska ayaa manta sheegay in aay hubinaayaan warar ah in burcad badeed Somali ah aay qabsadeen , waxeyna sheegeen in aay xiriir la sameeynayaa qooskooda oo jooga Ingiriiska. Burcadda badeeda somaalida ayaa bishaan waxeey qaadeen dhoowr weerar kadib makii laga baxay bad xerankii
madaweyne shariif oo muqdisho gaaray iyo dad ku dhinatay duqeeyn muqdisho ka dhacday
Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa daqiiqado ka hor ku soo laabtay magaalada Muqdisho, isagoo diyaarad gaar ah ka soo qaaday magaalada Sanca ee dalka Yemen oo maalin ka hor uu tagay.
Soo laabashada Madaxweyne Shariif ee Caasimada Soomaaliya ayaa sabab u noqotay dhimashada tobanaan ruux oo rayid ah, taasoo ka dambeysay markii Ciidamada AMISOM oo wehliya kuwa Dowladda KMG ay isku fidiyeen Maka Al-Mukaramada iyo qeybo ka mid ah degmada Hodan.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa si nabad ku soo caga dhigtay magaalada Muqdisho, inkastoo soo dagitaankiisa magaalada oo idil ay isla gariirtay hugunka Madaafiicda culus
Dagaalo iyo Duqeymo ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah Degmooyinka Hodan iyo H/wadaag, halkaasoo Ciidamada isku fidiyeen ka hor inta aanu soo caga dhigan Madaxweyne Shariif iyo wafdigiisa.
Inta badan mararka Madaxda Dowladda ay dhoofayaan amaba ay soo dagayaan ayaa waxaa ka dhashay qasaaro nafeed oo Rayidka soo gaara, marka wadsooyinka la xiro, deetana ay weeraro waali ah ku qaadaan Xoogaga Mucaaradka.
Khamiistii la soo dhaafay ayay aheyd markii Madaxweyne Shariif oo ka dhoofayay Garoonka Diyaaradaha Muqdisho weeraro Hoobiyeyaal lagu qaaday diyaaradiisa, taasoo Ciidamada AMISOM jawaab culus ay ka bixiyeen